Maxaad u Doortaa Chunkai？
Maxaan ugu baahanahay inaan kala saarno iibka iyo warshada? In kasta oo go'aankani xoogaa isku qasan yahay, halka aan ka bilawno ayaa ah in aan rajeynayno in macaamiisheennu ay la kulmi doonaan adeegyadeena ugu fiican meel dareen fiican leh. Sameynta silsiladda agabyada ballaaran ee adeegga ku saleysan ee adeegga waa istiraatiijiyad aan ...
Noocyada Waxyaalaha Baako-baaylaynta iyo Dib-u-warshadaynta
Nasiib wanaagse waxaa jira waxyaabo kale oo badan oo baakadeyn kara oo dib loo isticmaali karo oo la heli karo. Kuwaas waxaa ka mid ah: Waraaq iyo kartoon - warqad iyo kartoon dib ayaa loo isticmaali karaa, dib loo isticmaali karaa oo waa la baabi'in karaa. Waxaa jira dhowr faa iido oo noocan ah alaabada baakadaha, uguyaraan xaqiiqda ah inay ...
Maxay Xulashada Khaanadaha Baakadaha Maaliyadu Muhiim u Tahay?
Qofna ma arki karo waxyaalaha marka ugu horeysa. Waa qaabka kore ama qaabeynta ka hor indhahaaga horta. Haddii muuqaalkani ama qaab-dhismeedkani uu soo jiito macaamiisha, markaa waxay iibsan doonaan sheyga hubaal, haddii kale, luminta saamigaaga suuqa. Haddii aragtida koowaad ee sanduuqyada wax lagu soo rito ee alaabtu guuldaraysato ...
Sanduuqa Pizza Tayo Leh Oo Qiyaas Kala Duwan Leh
Tayada Sare ee jiingado Pizza Box Waxaan soosaaranaa saf ballaaran oo sanduuqyo pizza ah oo jiingado jiingado ah oo ku yimaada cabirro kala duwan. Waxaan sidoo kale ku takhasusay sanduuqyada pizza daabacan ee loogu talagalay dukaamada silsiladda leh ee ka socda 4-50 dukaanno. Waxaan sidoo kale awood u leenahay orod yaryar sidoo kale. Waxaan ka sameysan nahay inaan dalbanno xarunta iyo ...